marriage – iAfrika
Udaba lokulobola lude futhi miningi imigomo nemithetho elandelwayo uma kuqala lesigaba. Okubalulekile ukuthi yomibili imindeni kufanele iqinisekise ukuthi ziyalandelwa zonke izinto ngendlela ezojabulisa nalabo abangasekho. Lapha sibheka ukuthi ilobolo kufanele likhokhwe komuphi umuzi. UMama uThembi Mdlalose usilandise kabanzi ngaloludaba. Ilobolo isiko elibalulekile lesintu lapho imindeni emibili engazani iqala yakha ubuhlobo ngoba izingane zabo sezifuna ukuganana. … Read more
Tags Izinkolelo zesintu, marriage, Traditional Beliefs, Umshado